Kuhlungwe i-Google Pixel 2 XL | Izindaba zamagajethi
Kuhlungwe i-Google Pixel 2 XL
Ngosuku olulodwa nje, i-Google izosusa konke ukungabaza kwethu ekwethulweni kwesizukulwane esisha sama-smartphones e-Pixel, ngaphezu kwezinye izinto ezintsha, kufaka phakathi i-Google Home Mini enamahemuhemu amaningi.
Kepha ngenkathi lowo mzuzu ufika, amahemuhemu nokuvuza kuyanda, kugqamisa izithombe ezimbalwa ezishicilelwe ngu-Evan Blass odumile futhi lapho singabona khona ukubukeka okusha nokucatshangelwe iGoogle Pixel 2 XL ezoba nakho.
I-Google Pixel 2 XL ebukeka ifana ne-LG G6 kunangaphambili kwayo
Ngokwezithombe ezihlungwe nguBlass ngephrofayili yakhe enkundleni yokuxhumana uTwitter, I-Google Pixel 2 XL entsha izoletha izindaba kuwo womabili ama-hardware kanye nedizayini nesoftware.
Kwesinye sezithombe ezivuzekile, ubuqiniso baso obungakaqinisekiswa futhi, ngakho-ke, ngikweluleka ukuba uqaphele, singabona ngaphambili nangemuva kwe-smartphone entsha futhi, ngokusobala, kuzoba Isibonisi sesilinganiselo se-18: 9, njenge-LG G6, futhi isondele kakhulu ku-18,5: 9 ye-Samsung Galaxy S8.
Lesi sikrini sithatha iningi lazo zonke izingaphambili, zivikelwe i- umklamo ocishe ube luhlaka njengoba sekuvele kungumkhuba kuma-smartphones amanje kakhulu, imiphetho yesikrini ayikho kugobile ngakho-ke, naphezu kokufana okusobala, kuphawula amabanga nge-LG G6.
Ngemuva kuyabonakala ukuthi iGoogle Pixel 2 XL AKANAYO ikhamela ephindwe kabili, okuthile okungafanele kusimangaze ngoba kuyinsambatheka esabalele kuze kube namuhla.
Idivayisi nayo izobala amabili izipikha ezimbili zestiriyo, eyodwa ohlangothini ngalunye lwaphezulu nangaphansi, kuyilapho ikhamera yangaphambili itholakala ngaphezulu kwesobunxele.
Kepha mhlawumbe okugqame kakhulu isikhundla esisha sebha yokusesha ye-Google, manje esingaphansi kwezithonjana zemikhumbi yohlelo lokusebenza. Ngaphandle kokungabaza, ukukhethwa kwale ndawo akubangelwa yinoma yikuphi ukucabanga futhi sicabanga ukuthi kungenxa yesifiso sokuqinisa ukusetshenziswa kwaso.
Ucabangani ngeGoogle Pixel 2 XL entsha, uma kungenzeka kube yiyo le esiyibhekile?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Kuhlungwe i-Google Pixel 2 XL
Izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuthengisa izinto ezingamasekeni